Enye iphrojekthi ihloselwe i-gvSIG - i-Geofumadas
Enye iphrojekthi ihloselwe i-gvSIG
NgoFebhuwari, 2009 cadastre, I-GvSIG
Namuhla ngibe nomhlangano isisekelo kakhulu eMelika Ephakathi, futhi kwangizwisa ukwaneliseka okukhulu ukwazi ukuthi baye okubhekiswe ibhidi zokuthuthukisa gvSIG ukusetshenziswa kamasipala.
Ngibhekisela ekuThuthukisweni koMasipala okuMayelana neSisekelo, isikhungo esivela ku-1993 futhi esiye sathuthukisa amaphrojekthi ezingeni le-Central America esifundeni. Ngathola kubo eminyakeni embalwa edlule lapho esebenza USAID izimali ekugqugquzeleni sesimanje izinqubo kamasipala kubandakanya ezezimali, umhlaba kanye nokuphathwa kokusetshenziswa komhlaba abanye kufakwe ... nakuba ukwenza okungaphezu kwalokho.
Lesi sisekelo ithuthukiswe nineties ithuluzi eyaziwa ngokuthi Integrated kaMasipala Information System (SIIM) okwakuhlanganisa amamojuli ukusetshenziswa iSabelomali, Treasury, Control Tax, Accounting kanye cadastre neminyango njengento yokuqala kodwa futhi kufakwe abanye. Ngaleyo minyaka, isisebenzi sokwakha monolayer ku Fox Visual nezixhumanisi esingesihle kumafayela ArcView ukuma nge 3x eluhlaza.
Manje sengibonile inguqulo abaye bahamba kuyo, ngokwenza ngokusho komqondisi wabo omkhulu "Ukuhlelwa kabusha okuphelele"Kulokho okubizwa ngokuthi i-SIGMA Advanced Municipal Information and System Management. Uhlelo lunezingqalasizinda ze-multilayer, isendlalelo somsebenzisi i-web ngokuphelele, ithuthukiswe ku-.NET C # futhi nedatha ye-MySQL ekhonza idatha nge-asp evela kuseva ene-Windows Server 2003. Ngibonile ukusebenza futhi ngikuthola kuyithakazelisa kakhulu, sizoxoxa ngakho kamuva.
Kuze kube manje, uhlelo lunezimo zamamodomu ze-13 okungenani, eziqondiswe ekuphathweni komsebenzi omkhulu kamasipala kumali kanye ne-cadastre yesicelo sezimali. Lawa amamojula:
Ukubhalisa kwabathengi abahlanganisiwe
I-SIGMA inguqulo ehlelwe kabusha yalokho okwakuyi-SIIM eyedlule, ngokucacile okucacile. Kulo nyaka uzovuma komasipala eziyisikhombisa lapho omunye imizamo yami izoxhumanisa ezininginingi lokhu emsamo, kodwa Ngiphinde ngicabange ukuthi ngizozama lelisu namabalazwe umasipala okungukuthi kusuka ekuqaleni ku gvSIG, uyazi ukuthi laba bantu asizakale nesipiliyoni ukuze uqhubeke kweminye izindawo.
Kuze kube manje, uhlelo lusebenza ezingeni le-tabular, kodwa uma ngibabuza ukuthi baye bahamba kanjani ngokuphathwa kweJiyomethri, bangishiyile ngokwaneliseka okuhle:
Ngoba manje omunye wabafana kusukela esisekelo uthatha i-master degree ne-University of Girona, ngithemba ukuzihlanganisa nabo esinye isikhungo engikhulume ngaphambili ukuze ngithuthukise ukusatshalaliswa kwale thuluzi ekusetshenzisweni komasipala, futhi ekugcineni ngubani owaziyo uma nathi sithuthukisa izinsuku zamahhala ze-GIS ezingeni le-Central America esifundeni. Angiqiniseki ukuthi bazama ukujoyina Izinsuku ezintathu ze-SIG mahhala eseduze, ngisenomhlangano ozayo nawo.
Ngezinga lezi zikhungo ezibandakanyeka ekusebenziseni izinhlelo zokusebenza zamahhala noma eziphansi, sizoba nemikhuba engcono nokusimama okukhulu kwamaphrojekthi. Ngokwalokho Ngiyazi lokhu isisekelo, okuyinto indlela inhlangano engenzi-nzuzo, thina kuyodingeka ukhulume kule 10 ezayo njengoba okuhlangenwe nakho kwabo engaphezu kwengu-15 inqubo yokuncishiswa kanye sesimanje izinqubo ubanzi; ngakho sizobona uma behamba ngale ndaba.
Thumela Previous«Langaphambilini Amapuleti we-tectonic ku-Google Earth
Post Next I-ProgeCAD, enye enye indlela eya ku-AutoCADOlandelayo "
Izimpendulo ze-2 kuya "Enye iphrojekthi iqondisa i-gvSIG"
U-Eduardo Bonilla uthi:
Umsebenzi omuhle kakhulu, siyakuhalalisela. Sisebenza namanye omasipala e-El Salvador abanesithakazelo ekusebenziseni i-SIG. Sicela ungene ku-touch
david udumise uthi:
I am a umfundi ukuphathwa kwemvelo ngendlela eyiyo e Venezuela futhi ngiyaqhubeka nokunihlukanisa encaminanado ngokusebenzisa le software iphrojekthi umasipala wami, kulokhu Ngingathanda ukubona ukwaziswa okwengeziwe ngale inicitiva kakhulu lula ukuwabona lapho ngitadisha kungaba wusizo kakhulu ngoba mina ngiyabonga kusengaphambili !!!!